Isadora Kosofsky: သက်ကြီး သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်တစ်ခုရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဓာတ်ပုံများ။ - English-Video.net
Isadora Kosofsky: သက်ကြီး သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်တစ်ခုရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဓာတ်ပုံများ။
ဓာတ်ပုံသမားနဲ့ TED ဝိုင်းတော်သားဖြစ်သူ Isadora Kosofsky ဟာ အချစ်၊ ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ အထီးကျန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမိုင်းမှတ်တမ်းပြုစုသူတစ်ဦးပါ။ ဒီစူးစမ်းတဲ့ ဟောပြောချက်မှာ သူမကနေ ပြီး သူမရဲ့ သက်ကြီးဝါကြီးတစ်ဦးရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ် ဘဝတွေကို လေးနှစ်တာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို မျှဝေထားပြီး ၎င်းတို့ကနေပြီး ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိမှုနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ပတ်သက်မှုအတွက် ကမ္ဘာတစ်လွှား ရှာဖွေမှုအကြောင်းကို သင်ကြားပေးနိုင်ပုံကို ဖွင့်ဟထားပါတယ်။
Jeanie, Will and Adina
are three senior citizens
Jeanie, Will နဲ့ Adina တို့ဟာ
connected byaspecial relationship.
ဆက်သွယ်ထားတဲ့ သက်ကြီးဝါကြီး သုံးဦးပါ။
They view their bond asashield
from the loneliness of aging.
မှုက ကာကွယ်တဲ့ ဒိုင်းတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြတယ်။
I first met them ataretirement
home in Los Angeles,
ပထမ ဆုံခဲ့တာက Los Angeles
where I had been photographing
အဲဒီမှာ ကျွန်မက ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာ
I saw as they approached
the gate one night,
တစ်ညမှာ သူတို့သုံးဦး ဂိတ်ဝကို
and felt an immediate connection to them.
သူတို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုကို
Although I didn't know the details
of their love triangle,
I intuitively felt
သူတို့ဟာ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ သိအောင်
လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ အလိုလို ခံစားမိတယ်။
Questioninganurse
a day later, she said to me,
နောက်တစ်နေ့မှာ သူနာပြုတစ်ဦးကို .
မေးမြန်းရင်း ကျွန်မကို သူပြောတာက
"Oh, you're talking about the threesome."
"အိုး၊ သုံးယောက်တွဲကို ရှင်ပြောနေတာကိုး"
The trio set out onadaily adventure
to coffee and doughnut shops,
ဒီသုံးယောက်ဟာ ကော်ဖီဆိုင်၊ မုန့်ဆိုင်တွေ၊
I soon learned that the purpose
of these outings was solace
မကြာခင် သိလိုက်ရတာက ဒီအပျော်ထွက်ခြင်းရဲ့
andasearch for meaning.
The trio sought to combat their alienation
by literally integrating themselves
in public streets.
သူတို့ရဲ့ ကင်းကွာမှုကို တွန်းလှန်ဖို့
Yet, even when arm in arm,
ဘယ်သူမှ သူတို့ကို မမြင်ကြဘူး။
We often think that as we age,
we lose the desires held in our youth.
အသက်ရတဲ့အခါ မကြာခဏ တွေးမိတာကနုပျိုမှုမှာ
Actually, asateenage photojournalist
when I met the trio,
တကယ်က ဆယ်ကျော်သက် ဓာတ်ပုံသတင်းသမားအနေနဲ့
I saw their behavior asamirror
to the fears of exclusion
and desires for intimacy
ကျွန်မစိတ်မှာ လည်း စွဲလမ်းနေတဲ့
that I also carried.
I related to their invisibility,
သူတို့ရဲ့ ပျောက်နေမှုကို ကျွန်မ နားလည်တယ်
which pained me during my childhood
but has become my greatest asset
as an immersive documentarian,
အနေနဲ့ အကြီးမားဆုံး အရင်းအနှီးဖြစ်လာခဲ့တယ်
because I can just fade into my empathy.
အကြောင်းက ကျွန်မရဲ့ မျှဝေခံစားမှုထဲမှာ
inaneighborhood of screenwriters,
the trio assumed the invisibility
that each senior does.
"How is it that no one else
sees these three human beings?
" ဒီလူသားသုံးဦးကို အခြားဘယ်သူမှ
the only one who sees them?"
သူတို့ကိုမြင်ခဲ့တဲ့သူက ဘာလို့ ငါပဲ
Years later, as I began to share
this work with the public,
နှစ်တွေအကြာမှာ ဒီလက်ရာကို အများပြည်သူနဲ့
I noticed that people are largely
uncomfortable with this story.
လူတွေဟာ ဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ အတော်ကြီး
Perhaps it is because the trio
doesn't assume conventional notions
ဖြစ်နိုင်တာက သုံးဦးတွဲဟာ အချစ်၊
စိတ်ကူးယဉ်အချစ်(သို့) အတွဲနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့
romance or partnership.
They were unseen in public
and shunned by their peers.
သူတိုဟာ လူမြင်ကွင်းမှာ ပျောက်နေပြီး
They wanted to belong somewhere
သူတို့ဟာ တစ်နေရာရာမှာ ပတ်သက်ချင်ပေမဲ့
but only seemed to belong with each other.
I wanted to belong somewhere, too.
And my camera has beenacatalyst
for me to belong everywhere.
But beyond challenging sociocultural
norms about the elderly,
the trio sheds light
on fear of remoteness.
သုံးဦးတွဲဟာ သီးခြားဖြစ်မှုရဲ့ ကြောက်စိတ်
At the end of each day, they return
to their respective retirement homes.
Under the surface of their aloneness,
there isadesire for community,
There wasasense that they were each
yearning for their tribe,
but that comfort comes with compromise,
because Will cannot commit to one woman.
အကြောင်းက Will ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို
Sitting with Jeanie one day
in her apartment, she said to me,
တစ်နေ့မှာ Jeanie န့် သူမရဲ့တိုက်ခန်းမှာ
ထိုင်ရင်း ကျွန်မကို ပြောတာက
"Sharing Will isathorn in your side.
"Will နဲ့မျှဝေခြင်းဟာ သင့်ဘက်မှာ
A relationship betweenaman
andawoman is private.
It isacouple, notatrio."
ဒါက အတွဲလေ၊ သုံးယောက်တွဲမဟုတ်ဘူး။"
My process is to essentially
become the people I document
by spending years with them
as an observer-occupant,
to then become hidden in plain sight.
I was about 17 when I met the trio,
and I shadowed them for four years.
We actually see, in the breakdown
of social development,
ကျွန်မတို့ တကယ် တွေ့တာက
that adolescence and old age
look strikingly alike,
because both are periods
of identity confusion.
ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ မရေရာမှုရဲ့ ကာလတွေပါ။
I identified with the women.
But also with Will, who made me
aware of the divide in me.
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မမှာရှိတဲ့ ခွဲခြားမှု သတိထား
မိစေတဲ့ Will ကိုရောပါ။
The schism that we each often have
and the actuality of our situation.
ကျွန်မတို့ အနေအထားရဲ့ အဖြစ်မှန်ပါ။
Before shooting this series,
I was also in love with two different
people who knew about each other,
အချင်းချင်းသိကြတဲ့ မတူတဲ့ လူနှစ်ယောက်
ကိုလည်း ကျွန်မ ချစ်ခင်ခဲ့တယ်။
being the object over which they fought.
But I also knew what it was like
to be at the base of the triangle,
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ Jeanie သို့ Adina လို
like Jeanie or Adina,
"Why aren't I enough?"
I would look through my viewfinder
and see three elderly figures,
and it became impossible to deny
that regardless of age,
အခြားသူတွေကတစ်ဆင့် စကားပုံလာ အပေါက်ကို
we were each in pursuit of filling
the proverbial hole through other people.
Perhaps the discomfort of looking
at Jeanie, Will and Adina's story
ဖြစ်နိုင်တာက Jeanie, Will နဲ့ Adina တို့
ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ရာမှာ စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုက
is trulyareminder
that even at the end of life,
we may never reach the fantasy
we have envisioned for ourselves.
Isadora Kosofsky: သက်ကြီး သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်တစ်ခုရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဓာတ်ပုံများ။ | TED Talk | TED.com